DEGDEG: Garoonka diyaaradaha Hargeysa oo lagu qabtay rag ka tirsan Al-Shabaab iyo qalab ay wateen + Video - iftineducation.com
DEGDEG: Garoonka diyaaradaha Hargeysa oo lagu qabtay rag ka tirsan Al-Shabaab iyo qalab ay wateen + Video
aadan21 / April 30, 2016
iftineducation.com – Xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka dhawaajisay in magaalada Hargeysa ay ku sugan yihiin saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo madax ka tirsan hay’adaha kala duwan ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Wasiirka Duuliska iyo hawada Somaliland Dr. Cumar oo magaalada Hargeysa kula hadlayay Saxaafadda ayaa shaaca ka qaaday in garoonka diyaaradaha Cigaal Airport ay ku qabteen madax ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo boorsooyin ay ku jireen qalab khalkhal gelin kara ammaanka garoonkaasi.
Dr. Cumar ma sheegin qalabka waxa uu yahay, hase yeeshee waxa uu tilmaamay in guryo ay degan yihiin Wasiiro ka tirsan Somaliland ay gabbaad ka dhiganayeen rag uu ku tilmaamay inay kooxaha argagixisada ah la shaqeeyaan.
Waa markii ugu horeysay oo maamulka Somaliland si cad u qirto in degaanadooda ay ka howlgalaan kooxaha argagixisada ah ee Soomaaliya ku sugan, iyadoo horay loogu eedeyn jiray in ururka Al-Shabaab laga maamulo gobolada Waqooyiga Soomaaliya ee ay ka taliso xukuumada uu madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamuud Siilaanyo.
Hoos u Dhac ku Yimid Iibsashada iPhone-ka